अर्जुकी श्रीमती रुँदै भन्छिन्: ‘मलाई अंश चाहिन्छ, त्योसँग म बस्दै बस्दिन’ (भिडियो सहित)
August 5, 2020 5510
जीवनमा मानिसले बा’च्नका लागि अनेक सर्घष गरी रहेका हुन्छन् । आफ्ना सन्ता’नका लागि उनीहरुको मेहतन पनि त्यस्तै हुन्छ । एउटा बाबा’को माया आफ्नो सन्तान प्रति कस्तो’ हुन्छ रु त्यो त एउटा बुवालाई मात्र थाहा हुन्छ ।
कैलाली घर भइ हाल काठमाडौँमा ज्या’ला मजदुरी गर्दै आएका अर्जुन बिक एक छोराका’ बाबु हुन् । श्रीमतीले छोरा ४ महि’नाको हुँदा छोडेर गएपछि अहिले अर्जुनले आफ्ना छोरा’लाई आमा र बाबा दुवै बनेर हुर्काई रहेका छन् ।
आमाको काख नपाएको छोरा’लाई उनी आफैँ आमा बनेर काँधमा राखेर लुगाले बाँधेर काम’मा जान्छन् । छोराको उज्ज्व’ल भबिष्यका लागि दिन रात परिश्रम गरिरहेका छन् ।
अर्जुनको श्रीमती दुःख व्यक्त गर्दै
अर्जुन बिक दैनिक रुपमा यसरी नै आफ्नो सन्ता’न बोकेर ठेलामा समान ढुवानी सेवा गर्छन् । सन्तान प्रतिको अथाह माया तथा जिम्मेवारी एउटा बाबाको परिश्र’ममा देखिने रहेछ ‘। ‬त्यसको’ उदाहरण हुन् अर्जुन ।
पछिल्लो समय पिठ्युँमा आफ्नो बच्चा बोकेर ठेला गाडा चलाउने दाइ यत्रतत्र सबैको मन मुटुमा बस्न सफ’ल हुनु भएको छ ।
किनकी उहाँले गरेको ‘काम पनि साच्चिकै उदाह’रणीय छ । अर्जुन बि.क नाम गरेका ती ब्यक्ती अहिले काठमाडौमा ठेलामा सामान ओसार पोसार गर्ने का’म गर्दछ्न ।
भिडियो र फोटो मा देखीए अनु’सार उन्ले आफ्नो सानो छोरा लाई पनि पिठ्युँमा बो’केर काम गर्दछ्न ।कि’नकी त्यो बच्चाको आमा ले उनलाई छोडेर गएकि रहेछिन ।
जुन आमा ले गर्दा यो आ’पत अर्जुन सगै उनको बच्चा लाई परेको छ तिनै आमा लाई पत्रका’रले कैलाली मा भेटा’एका छ्न । र अर्जुन वाट आफू निकै अपहेलित भएको बताएकी छिन् ।
अर्जुनले सधैं भरी कुट्ने र गाली गर्ने गरेको उनी बताउँछिन्, त्यस्तै अर्जुनको घरमा पनि आफू सधैं हेपिएको र अपमानित हुनु परेको बताउँछन्, ससुरा र जेठाजुले पनि आफूलाई हिर्काउने गरेको उनको भनाइ छ ।
अर्जुन विक की श्रीमती
आफू काठमाडौंमा बस्दा आफूले धेरै दुःख गरेको उनी सुनाउँछिन् “मैले काठमाण्डौमा धेरै थोक काम गरेँ, कहिले ट्वाइलेट सफा गर्ने, बढार्ने, भुइँ पुछ्ने लगाएतका धेरै काम गरेकी छु”
उनी रुँदै भन्छिन् : “म अब त्यो घरमा गएर बस्न सक्दिन, मैले धेरै पिडा भोगेको छु । मलाई शारीरिक र मानसिक याताना दिईएको छ । त्यहि भएर म त्यो घरमा जान सक्दिन । अब मलाई पनि अंश चाहिन्छ”
आफूले बच्चा आफै सँग ल्याउन चाहे पनि आफूलाई श्रीमानले बच्चा सँगै ल्याउन नदिएको उनको आरोप छ । तर मलाई नै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरेका छन् , यथार्थ कुरा कसैले बुझ्न प्रयास गरेनन् ,उनी दुःख व्यक्त गर्दै भन्छिन् ।
उनी सग को यो विशेष कुराकानी भिडियो हेर्नुहोस…
Prevसानी दोहोरी गायिका आयुषासंग अमृतले पनि हारे दोहोरीमा (हेर्नुस् भिडियो)
Nextनायक आर्यन सिग्देलको आज जन्मदिन, कति वर्ष पुगे उनी ? हेर्नुहोस्
भोलि वैशाख ३० गते मंगलबारको राशिफल हेर्नुहोस्
आज जेठ ६ गते मंगलबारको राशिफल हेर्नुहोस्…
तपाईंको आजको दिन कस्तो हुनेछ? हेर्नुहोस् आजको राशिफल
भोलि साउन ३० गते शुक्रबारको राशिफल हेर्नुहोस्…ॐ…ॐ..‌‌